Global Voices teny Malagasy » Fianjerana Fiaramanidina: Fahatezerana & Alahelo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2017 23:27 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Miranah
Nisy fiaramanidina mpitatitra miaramila nianjera tao amin'ny distrikan'i Tehrant  tamin'ny 6 desambra, nahafaty olona maherin'ny 100, anisan'izany ireo mpanao gazety sy mpitati-baovao maromaro izay tao anatin'ny fiaramanidina.
Niezaka nanome tsiny ny mpanamory  sy ny fahirano Amerikana ho nahatonga izany loza izany ny governemanta Iraniana saingy niaka-peo ireo bilaogera, mpanao gazety sy tranonkala Islamista vitsivitsy mpomba ny repoblika, tahaka ny Baztab  (hiresaka momba izany etsy ambany aho) eny fa na hatramin'ny solombavambahoaka sasany tao amin'ny parlemanta  aza mba hanohitra ny tsy firaharahiana sy ny tsy fandraisana andraikitry ny governemanta. Nanangana bilaogy vaovao ny rahalahin'ny iray tamin'ireo niharam-boina mba hanarahana ny vaovao rehetra momba ity loza ity sy hahitana ny fizotry ny fanadihadiana. Nahafantatra ity bilaogy Tenda feno ratra  ity tamin'ny alalan'ny bilaogy Persiana new reporter  aho. Milaza ilay bilaogera fa mbola tsy niala tsiny ireo tompon'andraikitry ny miaramila hatramin'izao. Tao amin'ny lahatsorany, nosoloiny tomany/tabataba ny teny fanehoan-kevitra. Andeha hojerentsika hoe nahoana no tezitra mafy amin'ny governemanta Iraniana ny olona:
Ny sazy mihatra amin'i Iran ve no anton'ny fianjeran'ny fiaramanidina farany tao Tehran tamin'ny Talata? Hoy i Omid Memarian , mpanao gazety & Bilaogera manontany. Mamaly izy:
Nahoana no tena zava-dehibe ity fitsidihana tany Chahbahar  ity ka nirahana handefa ireo mpanao gazety ireo ho any amin'io toerana io ny mpanamory faharoa? Hoy i Zeytoun. Araka ny filazan'ity bilaogera ity, nalefa izy ireo (mpanao gazety) mba haka horonan-tsarimihetsika ny fihetsiketsehana miaramila ataon'ireo mpanara-dian'ny mpitarika ka azo sokajiana ho fanevatevana ny Mpitarika ny fahatongavana tara . Nilaza izy hoe nahoana no tsy maintsy nalefa tany amin'io toerana io izy ireo na inona na inona hitranga.
Nahoana no mangina ireo mpitondra fivavahana hoy i  pejvake khamoush,  mpitondra fivavahana reformista & bilaogera monina ao Qom . Simba ny fiaramanidinay ary samy tompon'andraikitra ny mpanamory sy ny mpandeha. Nilaza ny antony tsy niresahan'ny mpitondra fivavahana momba izany mba hanatsaharana ity karazana voina ity izy.
Shahram Kholdi , bilaogera monina any amin'ny Fanjakana Mitambatra nilaza hoe:
“There are rumours that when the IRIAF Hercules C-130 attempted emergency landing, the landing was delayed by the Mehrabad  control tower because a “high ranking official's” plane was about to take off at the same time“.
“Misy ny tsaho milaza fa rehefa niezaka ny hiantsona noho ny hamehana ny IRIAF Hercules C-130, dia nahemotry ny tilikambo fifehezan'i Mehrabad  ny fiantsonana noho ny ” fiaramanidin'ny ” manampahefana ambony hiantsona tamin'izany fotoana izany ihany koa”.
Kossof , bilaogera mpanao gazety nanoratra hoe:
Araka ny voalazan'ny Bazatb  (tranonkalam-baovao mpandala ny nentim-paharazana malaza ao Iran), maro ireo mpitantana sy manampahaizana matihanina momba ny indostrian'ny rivotra no nosoloina olom-baovao tsy za-draharaha. Manohy i Baztab fa ny fanovana eo amin'ny sehatry ny indostria dia mety hahatonga tsy fahampian'ny fiarovana sy ny loza mety hitranga amin'ny fiaramanidina.
Azontsika atao ny mamintina amin'ny filazan'ny mpamaham-bolongana Iraniana, Mr Behi, fa ny fianjeran'ny fiaramanidina fiaramanidina tao Teheran  dia:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/08/109332/
 Nisy fiaramanidina mpitatitra miaramila nianjera tao amin'ny distrikan'i Tehrant: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4518876.stm
 nanome tsiny ny mpanamory: http://iranema-online.com/titr1/files/002477.php
 solombavambahoaka sasany tao amin'ny parlemanta: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4519038.stm
 Tenda feno ratra: http://www.15984.blogfa.com/
 new reporter: http://www.ghajar.ir/
 Ny sazy mihatra amin'i Iran ve no anton'ny fianjeran'ny fiaramanidina farany tao Tehran tamin'ny Talata? Hoy i : http://www.memarian.info/en_weblog.asp?id=1134005952
 Chahbahar : http://en.wikipedia.org/wiki/Chabahar
 Araka ny filazan'ity bilaogera ity, nalefa izy ireo (mpanao gazety) mba haka horonan-tsarimihetsika ny fihetsiketsehana miaramila ataon'ireo mpanara-dian'ny mpitarika ka azo sokajiana ho fanevatevana ny Mpitarika ny fahatongavana tara: http://z8unak.blogspot.com/2005/12/blog-post_08.html
 Nahoana no mangina ireo mpitondra fivavahana hoy i : http://p-kh.blogfa.com/post-125.aspx
 Shahram Kholdi: http://secularcaniranik.blogs.com/scaniranic/2005/12/update_on_the_c.html#more
 Kossof : http://www.kosoof.com/archive/2005/Dec/%208/355.php
 Mr Behi, fa ny fianjeran'ny fiaramanidina fiaramanidina tao Teheran: http://mrbehi.blogs.com/i/2005/12/disaster_time_i.html